Quince nkịtị: uru na nsogbu ahụ - Quince - 2019
Ihe bara uru
Jiri n'oge ime ime
Jiri ọgwụ na omenala mee ihe
Ngwunye nke epupụta na ụkwara ume ọkụ na ọnyá afọ
Efere site na ogbugbo nke mkpụrụ osisi ahụ site na oge
Quince sirop maka anaemia
Mkpụrụ decoction maka ọrịa ụkwara afọ, ọrịa iku ume
Ngwunye nke epupụta na ọrịa nke usoro obi na arịa ọbara
Tiri diuretic na quince na-epupụta mkpụrụ maka ọrịa n'ime ọrụ akụrụ
Okpokoro isi nke osisi ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị
Ngwa na cosmetology
Quince ude mmiri / mkpuchi maka mmanu akpụkpọ
Quince mkpuchi maka akọrọ na nkịtị akpụkpọ ụdị
Quince ogbu mmiri maka ụdị anụ ahụ niile
Firming epupụta nke osisi
Quince infusion megide seborrhea
Calorie, Vitamin na mineral
Otu n'ime uru nke mkpụrụ osisi ndị ọzọ dị ka ya dị ka calorie dị ala, nnukwu osisi vitamin na ịnweta, nke dị oké mkpa maka ịrụ ọrụ nkịtị nke dị n'ahụ. Calorie quince bụ naanị 42 kcal kwa 100 g nke ngwaahịaya mere, mkpụrụ osisi ahụ dị irè maka ojiji maka ndị na-echegbu onwe ha maka ibu arọ na-eme nri nri.
Ihe dị elu nke pectins, salts nke mineral na ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ, ihe ndị na-edozi ahụ na organic, mono-na nkwarụ, vitamin nke dịgasị iche iche, na mmanụ ndị na-adịghị edozi ahụ sitere na carotenoids (betacarotene) na ascorbic acid na-eme ka ego bụrụ ihe dị ezigbo mkpa.
Ị ma? Ònye gaara eche echiche: ọnụ ọgụgụ acid ascorbic na quince bụ ego ise vitamin C na ya ama citrus isi mmalite - oranges na lemons (100 g nke otu n'ime mkpụrụ nwere 23 mg vitamin).
Ihe oriri na-edozi ahụ na vitamin nke ngwaahịa a bụ:
mmiri - 84 g;
fiber - 3.6 g;
carbohydrates - 9.6 g;
abụba 0,5 g;
ndi na-edozi - 0.6 g;
mineral: salts nke magnesium, ọla kọpa, sodium, phosphorus, ígwè, potassium na calcium;
saccharides: fructose, glucose;
(vitamin A), vitamin PP (nicotinamide), vitamin A (retinol), vitamin B (B1 - thiamine, B2 - riboflavin, B3 - nicotinic acid, B5 - pantothenic acid, B6 - pyridoxine, B9 - folic acid), vitamin E ( ike antioxidant), vitamin C;
carboxylic na hydroxycarboxylic acid: malic, citric, tartronic.
Ọ dị mkpa! Ngwongwo na eriri nke dị na quince na-eme ka usoro ahụ metabolic sie ike na ahụ, nke na-enye aka n'ibelata nha ahụ na nhazi ngwa ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, ịṅụ mkpụrụ osisi mgbe nile na-eme ka ụda dị njọ na ọkwa cholesterol n'ime ahụ.
Taa, obere shrub si n'aka Pink nke nwere nnukwu okooko ọcha na pink, oval leaves na mkpụrụ osisi edo edo, bụ nke si n'ala ndị Eshia bịa, ọ bụghị nanị otu ogige ubi na osisi, na-eme ka anyị nwee mkpụrụ osisi dị ụtọ na oge ọkụ, kamakwa mkpụrụ pụrụ iche nke na-egosi otutu ihe bara uru.
Quince mkpụrụ osisi ndị ama ha tart ụtọ-utoojoo, astringent uto. Na tebụl a ga-ahụ ya ma ọ dị ọhụrụ, sie, nke a ghere eghe, nke e ghere eghe, na n'ụdị juices, compotes, jams, jelii. Mgbe ụfọdụ, a na-etinye mkpụrụ osisi na tii, ndụmọdụ ndị a bara uru maka ezigbo ndị osi nri na nanị ihe eji egwu anụ: a ṅara n'ọkụ ma ọ bụ ihe na-esi ísì ụtọ bụ ihe na-atọ ụtọ na mgbakwunye anụ anụ, nakwa dịka ihe ntanetụ dị iche iche na ihendori.
Na-aguta banyere ihe ndị ahụ, ihe onwunwe na ngwa nke mkpụrụ osisi osisi: fig, ụbọchị, kumquat, papaya, lychee, arbutus, feijoa, longan, medlar, kivano, guava, painiap.
Ma mkpụrụ osisi na mkpụrụ ndụ na akwukwo nwere ọtụtụ ihe bara uru nke mkpụrụ osisi ahụ, nke a na-echekwa mma karịa, dịka ọ dị, na ụdị ọhụrụ ha dị ọhụrụ, ma ọ bụghị nkewa belata na nhazi. Na nkowa di iche iche anyi puru iche n'echiche kedu ihe bara uru quinceMgbe nyochachara ndepụta ndị a:
mmetụta ụbụrụ n'ahụ dum;
ihe gbasara antiphlogistic;
mmetụta astringent na diuretic;
ihe antiemetic (antiemetic).
A na-egosipụta mmetụta ndị a na ngwa nke nwa ebu n'afọ na nkà mmụta ọgwụ ọdịnala, a na-ejikwa ngosipụta dị ike nke antioxidant nke nwa ebu n'afọ maka ebumnuche ịchọ mma. Na mgbakwunye, quince akwukwo decoction nwere ihe osise agba nke nwere ike igbanye isi awọ.
Ị ma? A na-akpọ Quince "mkpụrụ osisi", n'ihi na ọkwa nke ígwè dị n'otu mkpụrụ osisi tozuru okè kwekọrọ n'ụkpụrụ mmadụ kwa ụbọchị (30 mg kwa 100 g mkpụrụ).
A na-atụ aro mkpụrụ osisi a maka ọgwụ mgbochi na maka ndị na-arịa ụfọdụ ọrịa: ọrịa nke obi, digestive, respiratory system, sclerosis, mbufụt nke pancreas, ọbara mgbali elu, ọrịa akwara. N'ihi ogo dị elu nke ígwè, ngwaahịa ahụ ga-ekpochapụ ndị na-arịa ọrịa anaemia, ndị antioxidants gụnyere ya na-egbochi ịka nká na ọdịdị nke etuto ọjọọ. Maka ndị ikom, quince na-arụ ọrụ na-agwọ ọrịa na nsị nke prostate gland na usoro urinary.
Ị ma? Ezigbo ndị na-enweghị ihe ọ bụla nwere ndị ikwu mba: ndị Japan na ndị China, dị iche na buds. A kpọtụrụ ndị Japanese quince na akụkọ ifo Gris n'oge ochie: ọ bụ onye ahụ bụ apple apple - onyinye sitere na Paris na-enye Aphrodite. Kemgbe oge ochie, a na-ewere mkpụrụ a dịka ihe ama nke alụmdi na nwunye, ịhụnanya na ọmụmụ.
Anyị niile maara na afọ ime bụ otu n'ime oge ndị kachasị mkpa ná ndụ nke nwanyị ọ bụla, ebe ọ bụ na nwa ahụ na-enweta ihe niile dị mkpa maka mmepe nkịtị na uto ngwa ngwa site na nne mgbe ọ nọ n'afọ. Ọ bụ ya mere eji eri nlezianya nyochaa ihe oriri nke nwanyị dị ime ma tinye ngwaahịa ndị nwere vitamin na ịnweta ngwongwo ndị nwere mmetụta bara uru n'ahụ ihe abụọ ahụ. Otu n'ime isi mmalite ndị a bụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị baa uru nke ụmụ anụmanụ ikpeazụ bụ quince. Ọzọ anyị na-ele anya na mmetụta nke ihe ndị dị na nwatakịrị a na nne ya n'ọdịnihu na nwa ya n'oge nke ime ime:
Ígwè na-akwado usoro usoro mgbasa ọbara, ikuku oxygen na akụkụ na usoro ndị ọzọ nke nne na nwa, ya mere na-enyere aka izere agụụ na-ekpo ọkụ nke nwa ahụ. A na-ejikwa quince na-agba ọbara ara ehi iji mejupụta ihe ndị ahụ na-efu mgbe ọbara meriri.
Enwere otutu ihe ndi na-eme ka mmanu na vitamin, tinyere obere oke nke nsi di na quince, na-enye aka na nri zuru oke nke nne na nwa, n'enweghi uru bara uru.
Folic acid na-ebelata ihe ize ndụ nke nwatakịrị na-etolite ikewapụ nke palate, ọrịa uche, protein na ike ike nke ahụ.
Miamine na-eme ka mmadụ ghara inwe ndidi mgbe ọ dị ime.
Ascorbic acid na mgbakwunye na antiviral a maara nke ọma, ihe ndị na-eme ka ọ dịkwuo elu, nwekwara ikike ịmepụta ígwè na ịmalite ọrụ nke hematopoietic.
Ụmụ nwanyị nwere mmuta na-ata ahụhụ site na edema, ga-egwu na ihe diuretic nke quince.
Iji dochie ọgwụ ọjọọ maka oké oyi, flu, a decoction nke mkpụrụ osisi na-eji, nke na-enye aka na ọkụ na mbufụt nke anya.
Ma ihe kachasị mkpa - isi ike maka nne na nwa ebu n'afọ n'ọdịnihu bụ glucose dị na quince.
N'agbanyeghị uru ahụike na-apụta ìhè nke quince, eji ya eme ihe ekwesịghị ime ka ọ pụọ, n'ihi na ọ nwere ike ịkpata mmeghachi omume nke nfụkasị: 2-3 na-eji kwa izu ga-ezuru, na-echebara àgwà nke nne na ọnọdụ nke nwa ebu n'afọ. Otú ọ dị, ka ị ghara imerụ onwe gị ahụ, ọ ka mma ka gị na dọkịta na-ahụ gị hụ ya.
Ọ dị mkpa! Otutu potassium di na aru nwere ike ibute mmebi nke ihe ojoo: enweghi ihe oriri nke anu aru; imebi nnu nnu-nnu; arụ ọrụ ike; nhazi; ihe ize ndụ nke ịmalite ọrịa akụrụ; ọbara mgbali elu arịba; mmetọ nke afọ; ọrịa shuga; agwọ ọrịa na-adịghị ngwa ngwa; nkwụsịtụ na fragility nke ntutu.
Ngwọrọgwu nke sitere na mkpụrụ nke mkpụrụedemede elu nke mkpụrụ osisi, inflorescences na-eto eto, yana akụkụ dị nro nke mkpụrụ osisi ahụ, ga-enyere aka wepụ nsogbu dị iche iche na ahụ, nakwa iwusi usoro nchịkwa mmadụ ike. N'okpuru ebe a, anyị ga-eso gị nweta ụfọdụ ntụziaka maka ọgwụgwọ ọgwụ ndị e ji mkpụrụ osisi mee:
Akụkụ ndị dị mkpa: epupụta nke ohia (5 g), mmiri na-ekpo ọkụ wetara mmiri na-esi esi (1 iko).
Usoro nke omume: wunye epupụta na mmiri; obụpịa ihe a na-etinye na mmiri bat nke kpuchiri mkpuchi n'ime akpa na enamel maka nkeji iri na ise; oyi (minit 45 zuru ezu maka nke a); gbanye broth site na akwa oyi akwa nke gauze; n'ime efere a kpochara, wụsa mmiri a iji nweta olu, nke dị na mmalite. Okwu a ga - enwe: ọ bụghị karịa 3 ụbọchị na okpomọkụ anaghị elu karịa + 5 Celsius C.
Ngwa: tupu ị rie nri (ihe dị ka ugboro atọ n'ụbọchị) maka ihe dị ka pasent abụọ.
Mkpa components: quince ogbugbo (1 teaspoon), mmiri (300 ml).
Usoro nke ihe: gbanye ihe ngwakọta maka ihe dị ka minit 30 na obere okpomọkụ.
Ngwa: iji kpoo oghere ọnụ ụzọ 2 ugboro n'ụbọchị.
Ị ma? Ihe e ji mara quince na-esi ísì uto sitere na mmanụ ndị dị mkpa, bụ nke dị na ọnụọgụ ụfọdụ n'ime akpụkpọ mkpụrụ ahụ.
Akụkụ ndị dị mkpa: mkpụrụ osisi, mmiri.
Usoro nke omume: saa mkpụrụ ahụ, belata n'ime obere iberibe, kpuchie mmiri na obụpde ruo mgbe ị gwụla; gbanye efere site na cheesecloth, wepụ pulp; obụpde ruo mgbe oké.
Ihe dị mkpa: mkpụrụ (1 tsp), mmiri (300 ml).
Usoro nke omume: okpomọkụ quince osisi wụsara na mmiri (nke a ga-ewe nkeji iri na ise); ekpuchi efere na saa mmiri na mkpuchi, kechie na towel, na-ekwusi ike banyere awa 2; efere efere site na cheesecloth.
ọkara otu iko ugboro atọ n'ụbọchị tupu eri nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị;
ke mpikota onu;
maka nro maka ire ọkụ, ọnyá.
Gụkwuo banyere uru bara uru nke mkpụrụ osisi: cherị, strawberries, raspberries (nwa), gooseberries, currants (acha ọbara ọbara, ọcha, nwa), buckthorn sea, cloudberries, cowberries, cranberries, princesses, yoshty, goji, mulberry, chokeberries, plums, cherry plums, piich , nectarine, apricots, pears, apples, tangerines.
Akụkụ ndị dị mkpa: akwụkwọ ọhụrụ nke ohia (100 g), vodka (ọkara otu iko).
Usoro nke omume: wunye epupụta na vodka; Nye ihe ngwakọta maka izu 3.
Ngwa: jiri infusion na ọnụego 60 kwa ụbọchị, kewara n'ime 3 doses (20 ọ bụla).
Akụkụ ndị dị mkpa: ngwakọta nke epupụta epupụta na mkpụrụ osisi (1 tablespoon), mmiri sie (200 ml).
Usoro nke omume: wunye akọrọ epupụta osisi na mmiri esi mmiri, obụpde maka 5-6 minit; dị jụụ, nje na-eji gauze ma ọ bụ sieve.
Ngwa: ịkwesighi ịṅụ ya dị ka tii na-adị na mbụ, nke ahụ bụ, ọ bụghị na aka ike, ma na 1 tablespoon 3-4 ugboro n'ụbọchị.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-esi na mkpụrụ osisi a, jide n'aka na ị ga-ewepụ ya. Ha nwere ihe kachasị dị ize ndụ maka ahụ mmadụ - amygdalin glycoside. N'ịbanye n'ime usoro nsị, ọ nwere ikike ịghọ cyanide, nke gụnyere nsị dị njọ.
Akụkụ ndị dị mkpa: mkpụrụ osisi quince na mkpụrụ ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị (7-8 iberibe), mmiri (1 cup).
Usoro nke omume: obụpde osisi, na-agbanye na mmiri, maka minit 3-5.
Ngwa: ugboro 3 n'ụbọchị.
Mgbochi na nchacha, ihe oriri na-edozi ahụ nke pulp, mkpụrụ na epupụta nke quince ọma gosipụtara onwe ha n'ọfịs cosmetology. Lee ụfọdụ ihe omimi ndị ga - enyere aka mee ka mma mara mkpụrụ a dị ịtụnanya:
Ihe dị mkpa: quince (1 ibe), vodka (1 cup).
Usoro nke omume: finely iri mkpụrụ osisi ahụ maka vodka, na-esi ọnwụ ruo 7-10 ụbọchị.
kpochapụ ihu na ngwakọta dị ka mmiri mmiri;
nkpuchi: eji akwa mmiri na-etinye ya na mmiri, tinye ya na ihu, jidere nkeji 15-20. Mgbe ihichachara, megharịa usoro 1 oge.
Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ na-echebara ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya anya, tụgharịa mmiri ahụ na mmiri a kụrụ, nke mere na ngwakọta mmiri / ihe mkpuchi mmiri bụ 1 ruo 3.
Ọ ga-abara ụmụ agbọghọ uru ịmụta otú e si eji rosemary, linden, marjoram, coltsfoot, dandelions, marigolds, chamomile, peony, calendula, nettle, lovage, enothera, periwinkle, savory, cherry, parsnip, letus, zucchini, walnuts, beeswax.
Akụkụ ndị dị mkpa: akụkụ dị nro n'ime mkpụrụ akwụkwọ (1 tablespoon), akwa nkochi (1 pc), butter (1 tablespoon), mmanụ aṅụ (1 teaspoon).
Usoro nke omume: kpochie nkochi ime akwa na butter butter, mmanụ aṅụ na quince pulp; jikọta nke ọma.
Ngwa: tupu itinye akpụkpọ ahụ ka a ghachachachacha ọcha, ihe nkpuchi ihu na-anọgide ruo minit 20 ma ọ bụ ọkara otu awa; nke pụtara na-ewepụ ya na ákwà dị nro, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji mmiri dị ọcha kpuchie ihu gị, jiri nwayọọ hichaa ya.
Ihe dị mkpa: quince (1 ibe), vodka (1 iko), mmiri (1 iko).
Usoro nke omume: wepụ ihe mkpuchi n'elu site na mkpụrụ ahụ, wee wụsa vodka ikpeazụ, na-esi ọnwụ ruo ụbọchị 14; nsogbu, gbakwunye ọbụna ihe ngwọta nke mmiri rose.
Ngwa: A na-etinye nrube n'ahụ site na ihichapụ ihu na decolleté.
Ọ dị mkpa! Ihe ọṅụṅụ, nke a napụtara site na mkpụrụ osisi quince ọhụrụ, na-emetụta nke ọma, ma na-ebelata freckledness. Ihu ihu na-enweta usoro dị nwayọọ na dị ọcha, ma na-elekwu anya na-enwe obi ụtọ.
Ihe dị mkpa: quince (1 ibe), vodka (1 cup), glycerin (1 tablespoon).
Usoro nke omume: belata mkpụrụ osisi ahụ na obere vodka, na-esi ọnwụ na ebe echedoro site na ìhè anyanwụ maka ụbọchị 14; mgbe ntinye tinye glycerin.
Antifungal, mgbochi mkpali mkpụrụ decoction nke quince Achọrọ ingredients: quince osisi (30 g), esi mmiri (1 cup).
Usoro nke omume: gbanye mmiri mmiri n'elu osisi, na-esi ọnwụ 3 awa.
Ngwa: iji kpochapụ ọnyá na ebe anụ ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa - iji mee ihe maka ịsa. Quince ngwa na-ewu ewu na ntutu isi:
Mkpa components: quince doo ke akọrọ ụdị (100 g), esi mmiri (1 liter).
Usoro nke omume: gbanye mmiri mmiri na-acha akwụkwọ akọrọ, hapụ maka minit 60.
Ngwa: ugboro 2-3 n'ime ụbọchị 7.
Nfe a na-eme ka eserese na - ese onyinyo
Ihe ndị dị mkpa: quince mkpụrụ (30 g), mmiri (1 cup).
Usoro nke omume: jikọta ihe ndị ahụ, mee ka ọ kwụrụ maka minit 30, wee weta mmiri ahụ na obụpde n'elu obere okpomọkụ, mgbe ahụ, nje.
Ọnọdụ nchekwa: na friji.
Ngwa: na ụdị iwe ọkụ, a ga-etinye akwụkwọ nsị n'ime akpụkpọ anụ ahụ kwa ụbọchị maka ụbọchị asaa. Mmiri dị n'ime ụlọ ma ọ bụ okpomọkụ ma ọ bụrụ na enweghị ntutu ga-enyere iwepụ na infusion.
Na mgbakwunye na nchịkọta nke ọgwụ ndị bara uru, nakwa dị ka nsụgharị nke ọrụ ebube, quince nwere contraindications maka ojiji, nke a ghaghị ịhụ iji ghara imerụ onwe ya.
Tupu ị na-eri otu mkpụrụ osisi a, ị ga-ahụ na ị nweghị enweghị ịkpachara anya:
ihe mgbagwoju anya;
onye ekweghi ekwe;
mmeghachi omume nro;
iji mkpụrụ osisi dị ọhụrụ na ọrịa nke mucosa gastric na akụkụ ndị ọzọ nke tract gastrointestinal;
arụ ọrụ olu.
Ọ bụghị n'efu na a na-akpọ mkpụrụ a na-amị mkpụrụ n'ezie na Ancient Greece bụ onyinye nke chi. O doro anya na Quince bụ mkpụrụ osisi kachasị ọnụ na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe ndị dị ndụ na ihe ndị dị mkpa dị mkpa maka ahụ.
Osisi mara mma Amorphophallus: iwu nlekọta
Ihe kacha adọrọ mmasị banyere ifuru "enweghi ndidi": nkọwa, foto na aro maka ịkụ na ilekọta balsamic ubi
Obere mpempe akwụkwọ maka seedlings na windill na-eme ya n'onwe gị
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Quince: bara uru njirimara na contraindication maka ndị inyom na ndị ikom